जानिराख्नुस् ! जीवनमा के त्याग गर्दा के पाईन्छ ?
Tue, Jun 25, 2019 at 1:19am
त्यागबाट मोह नाश हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर त्याग्नको लागि आफूसँग हुनुप¥यो । त्याग्न जरुरी छ । त्याग्ने अभ्यास हुनुपर्छ । एक–एक कुरा गरेर छोड्दै छोड्दै जानु छ । किनभने अन्तिममा शिवस्वरुपमा आफूलाई लिएर जानु छ । यी बिकारहरु लिएर जान सकिन्न । मेरा कमाइहरु लिएर जान सकिन्न । किनभने मेरा प्रत्येक कमाइहरुमा अहं हुन्छ । अहंकार हुन्छ । मैले गरेँ भन्ने हुन्छ र यो अहंले अवरोध हुन्छ । त्यसैले त्याग्नुपर्छ । मेरा सबै कृत्यहरु त्याग्दै–त्याग्दै जाऊँ, सुध्द हुँदै जाऊँ र अन्तिममा मेरो कमाइ केही पनि बाँकी नबसोस् । मैले यति चाहिँ कमाएर लिएर आएँ भन्ने नै नहोस् । सबै खाली बनाऔं ।
मेरा कुनै पनि कार्य, कुनै पनि कर्मका फलहरु मेरो साथमा छैन, सबै कर्मफलहरु मैले त्यागिदिएँ । पाप त ल्याइनँ छोडेँ छोडेँ, पुण्य पनि लिएर आइनँँ किनभने पुण्य मेरो साथमा गयो भने मलाई अहं हुन्छ । यो पुण्य मैले कमाएको हो नि । मैले आफ्नो भलाइमा प्रयोग गरेको छु । यसले अहं हुन्छ । यो अहंले हामीलाई सत्यको नजिक जान दिँदैन । त्यसैले पुण्य पनि सबै त्याग्नु छ । पूजा पनि त्याग्नु छ, पाठ पनि त्याग्नु छ, मन्त्र, जप सबै कुरालाई त्याग्नु छ । अशुभलाई त त्याग्यौंत्याग्यौं, शुभलाई पनि छोड्नु छ र निर्मल, कञ्चन बन्नु छ । शिवोहम्, शिवोहम्, शिवस्वरुप ।
यदि आफू शिवस्वरुपमा उपलब्ध हुनु छ भने यी मोहका तानावानाहरुलाई त छोडेर जानुपर्छ । यी अहंकारका क्षेत्रहरुलाई त घटाउँदै–घटाउँदै जानुपर्छ । त्यसकारणले आफ्नो सबै कृत्यहरुलाई त्यागौं । तर हामीले यसलाई बुझ्न सकेनौं । जे कमाएकै छैन, त्यसलाई त्याग्न खोज्यौं । मैले सम्पत्ति कमाएको छु भने अनि न त्याग्ने । जोसँग एक रुपैयाँ छैन उसले के त्याग्ने ? कमाएकै छैन उसले के त्याग्छ ? त्यागको मजा कसरी लिन सक्छ ? र त्यो मोहलाई कसरी काट्न सक्छ ? मोह बन्यो भने न त्यसलाई हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, परीक्षण हुन्छ । मसँग धेरै पैसा छ भने म यो पैसा त्याग्न सक्छु कि त्याग्न सक्दो रहेनछु, परीक्षण हुन्छ । आफ्नो जाँच हुन्छ । त्यत्रो पैसै कमाएको छैन अनि त्यागको कुरा हुन्छ । त्याग्नुपर्छ सब त्याग । ईश्वर भेटिन्छ । कमाइ भए पो त्याग्नु ? पूजा गरेको भए पो पूजालाई त्याग्नु, प्रार्थना गरेको भए पो प्रार्थनालाई पनि छोड्नु, मन्त्र जप गरेको भए पो मन्त्रलाई छोड्नु, केही गरेकै छैन, कसलाई छोडौं ? त्यसैले धर्मको पहिलो शुरुवात पूजा, प्रार्थना हो ।
शुरुमा मन्दिर स्थापना गर्नुपर्छ । पूजा गर्नुपर्छ । अनि पूजा छोड्न पनि मजा आउँछ । अनि परीक्षण गरौं आफूलाई, म पूजा छोड्न सक्छु कि सक्दिनँ । पूजाले मलाई खिचेको त छैन, एउटा बन्धन त भएन । पहिले मलाई अवगुणहरुको बन्धन थियो । नराम्रा कामहरुले बाँधिएको थिएँ । म पहिला दानवीय कर्मको बन्धनमा थिएँ । अब म सत्वगुणहरुको बन्धनमा त परिनँ । अब म देवताहरुको बन्धनमा त परिनँ । आखिर बन्धन त बन्धन हो । अशुभको बन्धन पनि बन्धन नै हो, शुभको बन्धन पनि बन्धन नै हो । त्यो दुईटैले बाँध्छ । दुईटैमा हामी अड्किएर बस्छौं । यो शुभबाट पनि हट्यौं, आपूmलाई कञ्चन निर्मल बनायौं, कुनै पनि प्रकारको मेरो कमाइ रहेन, अशुभको कमाइ गरेको थिएँ, त्यसलाई त छोडिदिएँ, त्यागी नै दिएँ, अब अशुभ मलाई चाहिएन ।
म कसैको अपमान गर्दिनँ । कसैको चित्त दुःखाउँदिनँ । कसैलाई दुःख दिन्न । यो त मैले छोडिदिएँ । अब अरुलाई सुख दिने, सबैलाई भलाइ गर्ने, अरुको मान, सम्मान, इज्जत गर्ने मेरा स्वभावहरु थिएँ, यसबाट पनि मैले केही पाएँ । राम्रो गरेको छु भन्ने अहंकार बन्यो । यसलाई म छोड्न सक्छु कि सक्दिनँ ? परीक्षण गरौं । नराम्रो छोड्न अति सजिलो हुन्छ । राम्रो छोड्न अति नै कठिन हुन्छ । सबै कुरा त्यागेर गुरुको शरणमा पर्न गाह्रो त छ, तर पनि सजिलो छ । तर गुरुलाई छोडेर जान अति कठिन छ । सबै कुराहरुलाई त्यागेर भगवान्को शरणमा पर्न सजिलो छ । भगवानलाई त्याग्न अति नै कठिन छ ।
सबैभन्दा ठूलो बन्धन हो यो, अब यहाँबाट कसरी पार हुने होला ? यो भगवान्को, गुरुको मोहबाट कहिले मुक्त हुने होला ? र जुन दिन हामीले गुरुको मोहलाई पनि छोड्यौं, भगवान्को मोहबाट पनि मुक्त भयौं, अब मैले केही कमाएँ, मेरो कमाइ भन्ने साथमा जाँदै गएन, कुनै कमाइ छैन । अब मेरो कमाइ छैन, कर्मफल छैन, अब केको अहंकार ?
पूर्ण रुपमा अहंकारको विसर्जन नै मुक्ति हो । कुनै चीजले हामीलाई बाँधेको छ भने अहंले बाँधेको छ । अहंकारबाट मुक्ति नै मुक्ति हो । अन्तिम अहंकारको म भक्त छु । म भगवान्को भक्त छु र मैले खूब भगवान्को पूजा गरेँ, प्रार्थना गरेँ, मैले केही शुभ गरें राम्रो गरें, यो राम्रो गरेको कारणले यो फल, यो सुख भोगिराखेको छु । यहाँबाट कडा अहंकारको जन्म हुन्छ । यो सबै राम्रो जति मेरो कमाइ हो । अब यहाँ ईश्वरको के काम ? सब कमाइ त मेरो हो । मै गर्न सक्छु । यहाँ प्रयास मात्रै महत्वपूर्ण भयो । यहाँ त प्रश्नहरुको ठाउँ नै रहेन र प्रयास पहिलो हो । प्रसाद अन्तिम हो । तर जसले प्रयास गरेन उसले प्रसादचाहिँ पाउँदैन । एक–एक श्रेणी भएर जानुपर्छ । पहिला खूब प्रयास गरौं अन्तिममा सबै प्रयासलाई त्यागिदिऔं । त्याग । अब प्रसादको प्रतीक्षा गरौं । सम्पूर्ण प्रकारका मेरा कमाइहरुलाई म त्याग्न सक्छु । यति हिम्मत छ, यति आँट छ भने यति मात्रै परमात्मा ज्ञानमा उपलब्ध हुन सक्छ । परम सुख आनन्दमा डुबुल्की मार्न सक्छ । यो त्याग गर्ने हिम्मत छ कि छैन ? जबसम्म मोह छ, कहाँको धन, जबसम्म म हुन्छु, त्यहाँसम्म ईश्वर हुँदैन । जहाँ म समाप्त हुन्छु अनि ईश्वर शुरु हुन्छ ।
अहिले म जस्तो अवस्थामा छु, यस्तो अवस्थामा मेरो र ईश्वरको भेट हुनै सक्दैन । कहिल्यै भेट्दैन र म भनेको के हो ? अहिले म जसलाई म भन्छु, यो सबै अहंकार हो । ‘म’ अहंकारबाट बनेको छ । यो अहंकार र ईश्वरको कहिल्यै भेट हुँदैन । जसरी अँध्यारो र उज्यालोको कहिल्यै भेट हुँदैन । जसरी उज्यालोको नजिक अँध्यारो आउन सक्दैन । त्यसैगरी परमात्माको नजिक अहंकार जान सक्दैन र मैले शुभ काम गरेर, मैले भगवान्को पूजा प्रार्थना, ध्यान गरेर मैले भगवान्लाई पाएँ भन्ने हो भने उसले भगवान्लाई त पाउँदै पाउँदैन । यो कुनै पनि कर्म अहंकारले गर्छ । मैले गरेर के पाउँछु ? जति पनि कामहरु हुन्छ, अहंकारले गराउँछ । कर्म गराउने नै अहंकार हो । अहंकार सकियो कर्म पनि सकियो । केही कर्म रहँदैन अनि ईश्वरको दुनियाँ शुरु हुन्छ ।
यसको अर्थ बाहिरबाट गर्ने काम रोक्नु भनेको हैन, मनले गर्ने काम रोक्नु भनेको हो, मेरो मनको अहंकार रोक्नु भनेको हो । आफ्नो कर्मबाट अहंकार आउने हैन, अहंकार मनको भावबाट, बिचारबाट आउने हो । मैले गरेँ, मैले कमाएँ भन्ने भावबाट अहंकारको जन्म हुन्छ । त्यसैले त्यागको महत्व छ । तर त्यसले त्याग गर्न सक्छ, जुन व्यक्तिसँग छ, कमाइ गरेको छ । पहिला त खूब खूब कमाइ गर्नु छ । शुभकर्म गर्नु छ, पूजा गर्नु छ, प्रार्थना गर्नु छ, ध्यान गर्नु छ, गुरुको शरणमा जानु छ । सब कुरा गर्नु छ । गरिसकेपछि अहंकार नबनोस् भनेर आपूmले गरेका शुभकर्महरु पनि स्वाहा । होम गर्न तयार हुनुपर्छ । मैले गरेका सबै शुभकर्महरु यज्ञमा आहुति दिएँ । पहिला हरेक दिन यज्ञ गर्ने परम्परा थियो । भगवान्को पूजा ग¥यौं, स्तुति–वन्दना ग¥यौं, अनि होम ग¥यौं । यज्ञ ग¥यो, छोडिदियो । यज्ञको अर्थ थियो मैले गरेको सबै कर्महरु, धर्महरु पनि म लिएर जान्न, जे–जे गरें, जति शुभ गरें, ती सबै स्वाहा । होम गरौं । सबैलाई आहुति दिऔं । जसले आफूले गरेका पुण्य कर्महरुलाई पनि आहुति दिन जान्यो, यही व्यक्ति कर्मबन्धनबाट मुक्त भयो ।
हैन भने पहिला नर्कले समातेको थियो, पछि स्वर्गले समात्छ । पिँजडा त पिँजडा हो पहिला फलामको पिँजडा थियो, अब सुनको पिँजडा भयो । जो मानिस जेलमा छ, म सुनको जेलमा छु भनेर अहंकार गर्नुको के अर्थ भयो र ? फलामको होस् कि सुनको होस् जेल त जेल हो । यसैगरी यो सबै जेलबाट व्यक्ति मुक्त हुन सकोस्, त्यसैले यो त्यागको महिमा शुरु भयो । त्यागबाट समर्पण जन्मिन्छ । समर्पणबाट भक्ति जन्मिन्छ । जहाँ भक्ति, त्यहीँ ईश्वर प्रकट हुन्छ । यदि हामीलाई ईश्वरसम्मको यात्रा गर्नु छ भने पहिला खूब–खूब कर्म, कर्मबाट आएको फल त्याग्नु, कर्मफल त्याग पछाडि समर्पण, समर्पण पछाडि भक्ति, भक्ति पछाडि धर्म ।
हामी सबैलाई पनि आफ्नो अहंकारप्रति सजग हुने अवसर मिलोस् । हामी सबैलाई पनि ध्यान गर्ने अवसर मिलोस् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ‘नेपाल दर्शन’ ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने योजना
साष्टांग प्रणाम गर्नुको वैज्ञानिक कारण यस्तो छ
'योग प्रवर्तक पतञ्जलिको जन्म भारतमा नभई नेपालमै'
भगवान राम र कृष्ण किन भए निला ? निलो रंगमा नै समेटिएको छ असिमितता
महाभारतको रहस्यमा लुकेका कथा, ५ सुनका तीरदेखि कर्णको अन्तिम परिक्षासम्म
सिङ्गो इतिहास : १६ वर्षदेखि रातो मछिन्द्रनाथको मूल पूजारी बज्राचार्यको भोगाई र बुझाई
ध्यानका चमत्कारिक १० फाइदा, ध्यान गर्नाले हमेसा जवान!
त्यसपछि जीवन जिउनुको मजा 'आनन्द' मात्र नभई 'परम-आनन्द'मा रूपान्तरण हुन्छ !
जानिरख्नुहोस् ! जीवन सम्पन्न हुने एउटा अचुक कारण छ यस्तो
ऐतिहासिक वाग्मती तीर्थयात्रीको समूह साँखु बज्रयोगिनीमा
सुन्दर स्त्रीतिर मन किन जान्छ ? जानौ यसको कारण
गौतमबुद्धद्वारा मानव जातिलाई नैतिक सत्कर्मको महत्वपूर्ण पाठ : चतुर्थआर्यसत्य
गुप्तेश्वर महादेव गुफामा आरती सेवा सञ्चालन
एक दशकपछिकै शुभ अक्षय तृतीया आज, सातु–सर्वत दान गर्ने र खाने दिन
साभ नेपाल संस्थाद्वारा सांकृतिक वृत्तचित्र तयार
आज मातातिर्थ औंसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन !
मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण आइतबार पुल्चोकमा हुने
जीवनका दुख र कष्ट हटाउन अपनाउनुहोस् भगवान बुद्धको जीवन उपयोगी सूत्र !
रसुवागढी नाकाबाट मानसरोवर यात्रा शुरू, अधिकांश यात्रु भारतीय
पञ्चाङ्गका सामग्री सारेर भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशन, अधिकार हनन्
यस्ता मानिसहरु लाई कहिल्यै मिल्दैन भगवानको साथ! सधै कंगाल भएर बस्नु पर्छ
पाटनमा रातो मछिन्द्रनाथको रथ बनाउन शुरु, यस्तो छ प्रक्रिया !
याद राख्नुहोस्, बिहिवार भुलेर पनि यी काम गर्दा हुनसक्छ ठुलो दुर्घटना !
जानिराख्नुस्, जिवनमा हुने अशुभ हटाउने विधि छन् यस्ता !
वर्षभरि नै हुनेछ लक्ष्मीको बास ! नयाँ वर्षको दिन घरमा गर्नुहोस् यी काम !
चैत्र २४ गते देखि ३० गते शनिवारसम्मको तपाईको राशिफल कस्तो ?
नेवार समुदायको पाँहाचेह् पर्व, लुकुमहाद्योको पूजा
तपाई भाडाको घरमा बस्नुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोस् यी कुरामा !
कहिल्यै नछुट्ने जोडी भएका राशीहरु यी हुन ! हेर्नुहोस आफ्नो राशी
कम मेहनतबाट धेरै आम्दानी गर्न चाहानुहुन्छ ? चाल्नुहोस् यी कदम